ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်ယောဘကိုအင်တာဗျူးအကူအညီနဲ့ | အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
တစ်ဦးကအလုပ်အင်တာဗျူးသင်နှင့်အလုပ်ရှင်အကြားတစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်. အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်း, အလုပ်ရှင်သင်သည်များစွာသောမေးခွန်းများမေးပါလိမ့်မယ်. ကအလုပ်တစ်ခုရဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအင်တာဗျူးအဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းငှါအဘယ်သို့သိရန်လိုအပ်.
အလုပ်ရှင်သည်သင်၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုမေးမြန်းပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကသင့်ရဲ့ပညာရေးနှင့်သင်ခဲ့ကြပါပြီမည်သည့်လေ့ကျင့်ရေးနှင့် ပတ်သက်. သိလိုပါလိမ့်မယ်. မေးခွန်းများကိုအင်တာဗျူးရန်သင့်အဖြေကိုလည်းဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုပြသ. သငျသညျအင်တာဗျူးအဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းငှါအဘယ်သို့သိလျှင်, သင်အလုပ်ကောင်းတစ်ခုလူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းအလုပ်ရှင်ပြပါလိမ့်မယ်
ယောဘသည်အင်တာဗျူးများအမြဲလူတစ်ဦးအတွက်နေရာမယူကြဘူး. သင်ပထမဦးဆုံးဖုန်းအင်တာဗျူးရှိစေခြင်းငှါ. သင်ကုမ္ပဏီအကျိုးရှိမည်ဟုဘယ်လောက်ပြရန်ဤအခွင့်အလမ်းကိုသုံးပါ. သင်ဖုန်းကိုအင်တာဗျူးရှောက်သွားလိုလျှင်, ပြီးနောက်သင်လူတစ်ဦးအတွက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းလိမ့်မည်. များစွာသောအလုပ်အကိုင်များများအတွက်, သင်တဦးတည်းဖုန်းကိုအင်တာဗျူးနှင့်အနည်းဆုံး In-လူတစ်ဦးအင်တာဗျူးရပါလိမ့်မယ်. ဒါမှမဟုတ်သူတို့သင်နှင့်အတူဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုထူထောင်စခွေငျးငှါ.
ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်. သင်သည်တတ်နိုင်သမျှကိုထွက်ရှာမည်. သင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အဖြေတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းအသိပညာပြသနေလျှင်, အင်တာဗျူးသင်အလုပ်ကိုဂရုစိုက်သိရကြလိမ့်မည်.
သင့်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သတင်းအချက်အလက်မှတဆင့်ဖတ်နိုင်. သင်တို့သည်လည်း LinkedIn တို့အပေါ်ကုမ္ပဏီအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. ဤမေးခွန်းများကိုဖြေကိုရှာဖွေ:
ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကစီမံကိန်းတစ်ခု / အလုပ်ကိုအခုကဘာလဲ?
Google တွင်ကုမ္ပဏီ၏နာမတော်အဘို့အရှာရန်ပြီးတော့သင်ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုမဆိုသတင်းကိုရှာဖွေကြည့်ရှုဖို့ "သတင်း" ကိုနှိပ်ပါ. သငျသညျအကောင်းသတင်းကိုမြင်ရပါလျှင်, သင်သည်သင်၏အင်တာဗျူးထဲမှာဖော်ပြနိုင်ပါတယ်.
ကုမ္ပဏီအပေါ် Find မှန်တံခါး, ဝန်ထမ်းကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောဆိုဘယ်မှာ website တစ်ခုဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်.
ဒါကြောင့်အများပြည်သူနေရာအရပ်င် အကယ်., ထိုကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်အဖြစ်, အတွက်သွားနှင့်အလည်အပတ်ခရီး.
သင်သည်သင်၏သုတသေနပွုအဖြစ်, သင်သည်သင်၏အင်တာဗျူးတွင်မေးနိုငျတချို့မေးခွန်းတွေကစဉ်းစားတွေးခေါ်စတင်ရန်, သူတို့ကိုရေးချ.
သငျသညျပြီးသားသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက် လုပ်. စေလွှတ်ပြီ. အလုပ်ရှင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဘာမှအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမေးမြန်းပါလိမ့်မယ်. သင်အင်တာဗျူးရှေ့၌သင်တို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖတ်အရေးကြီးသည်က. သင်အတိတ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သို့မဟုတ်များအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းကုမ္ပဏီများဖော်ပြရန်နိုင်ဖြစ်သင့်.
သင်လုပ်နိုင်လျှင်, သင့်ရဲ့အင်တာဗျူးနေ့ကရှေ့တော်၌ထိုအင်တာဗျူးတည်နေရာဖို့အလေ့အကျင့်ခရီးအောင်. သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းလေ့လာပါ. ဒါဟာကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦရဲ့အလိုလျှင်, လက်ျာဘက်ဝင်ပေါက်ကိုရှာဖွေ. ထိုအခါသင်သည်နေ့အဘို့ကိုပြင်ဆင်ပါလိမ့်မည်.
ရှေ့ဆက်စီစဉ်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်အချိန်ထပ်ပေး. သငျသညျအနီးအနားရှိစောင့်ဆိုင်းနိုငျသောကွောငျ့ဒါဟာနှောင်းပိုင်းကထက်အစောပိုင်းဖြစ်ပိုကောင်းမယ့်. အင်တာဗျူးမှာရောက်ရှိ 10 မိနစ်အစောပိုင်းဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအစောပိုင်းက.
အကောင်းတစ်ဦးဝန်ထမ်းဖြစ်ခြင်းအချိန်ပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လာမယ့်ဆိုလိုတယ်. သင့်ရဲ့အင်တာဗျူးမှလာမယ့်လနှောင်းပိုင်းသင်ငှားရမ်းထားနေကြသည်လျှင်သင်အလုပ်အတွက်နှောင်းပိုင်းကဖြစ်အံ့သောငှါ၎င်းအင်တာဗျူးကိုပြသ. ဒါဟာသင်အကြီးအအလုပ်တစ်ခုအင်တာဗျူးကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်လျှင်ပင်ငှားရမ်းထားခံသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုကိုလျှော့ချပေးမည်.
ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူးဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင်ဆဲရှေ့ဆက်စီစဉ်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်အချိန်ထပ်ပေးဖို့လိုအပ်. သငျသညျတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာအရပ်၌ရှိကြ၏နှငျ့သငျပြတ်တောက်ရလိမျ့မညျမဟုသေချာပါစေ. သငျသညျအိမ်မှာအင်တာနက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်, ပြုသောသူမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုရှာဖွေနှင့်သူတို့၏အိမ်မှာအင်တာဗျူးပြုပါ. သင်တို့သည်လည်းသူတို့သည်သင်၏အင်တာဗျူးကို set up ကူညီပေးပါမည်ဆိုပါကကြည့်ရှုရန်သင့်ဒေသခံစာကြည့်တိုက်မှစကားပြောနိုင်သည်. တောင်မှတစ်ဦးကဗီဒီယိုအင်တာဗျူးများအတွက်, သငျသညျအဆင်သင့်နှင့်အစောပိုင်းမိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြည့်ရှုလော့, သင်၏အလုပ်အင်တာဗျူးဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုအပေါ်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်လျှင်ပင်. ဤတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှာဖွေနေခြင်းဖြင့်အင်တာဗျူးများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံအချို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်:
အမြဲတမ်းအင်တာဗျူးဖို့စင်ကြယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်. အင်တာဗျူးမသွားမီတဲ့ရေချိုးခန်းကိုယူ. သင့်ရဲ့သွားတိုက်နှင့်သင့်ဆံပင်ဖြီး.
ခြေနင်းဝတ်ဆင်သို့မဟုတ်အင်တာဗျူးမှလာသောသေတ္တာလှန်မထားပါနဲ့. ခြေအိတ်နဲ့ဖိနပ်ဝတ်ဆင်. ထိုကဲ့သို့သောဂျင်းဘောင်းဘီတစ်ခုသို့မဟုတ်တီရှပ်အဖြစ်ပေါ့ပေါ့အဝတ်မဝတ်ပါနဲ့. ဘောင်းဘီတိုသို့မဟုတ်အကြံပေးအဖွဲ့ထိပ်ဝတ်ဆင်မထားပါနဲ့. ဦးထုပ်ဝတ်ဆင်မထားပါနဲ့, စုဆောငျးထုပ်, အင်တာဗျူးစဉ်သို့မဟုတ်နေကာမျက်မှန်. အလွန်ကြီးမားပြီးအရောင်အသွေးစုံလင်ကြောင်းလက်ဝတ်ရတနာရှောင်ကြဉ်ပါ.
လူတို့သညျအဘို့အ Professional ကအဝတ်အစားဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ခလုတ်နဲ့အင်္ကျီရှည်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဘောင်းဘီဝတ်ထားဆိုလိုတယ်. အလုပ်ကအရမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦးဝတ်စုံကိုနှင့်လည်စည်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်. မိန်းမတို့သည်, တစ်ဦးကျိုးနွံစားဆင်ယင်ဒါမှမဟုတ်စကတ်နဲ့အင်္ကျီသို့မဟုတ်စမတ်ဘောင်းဘီလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိလိမ့်မည်. သင်တို့မူကား, ပိုက်ဆံအများကြီးဖြုန်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး! သင်သည်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာဒုတိယလက်စတိုးဆိုင်မှာကောင်းသောအင်တာဗျူးအဝတ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်, ထိုကဲ့သို့သောချစ်ကြည်ရေးအဖြစ်.
အင်တာဗျူးမတိုင်မီသို့မဟုတ်စဉ်အတွင်းကွမ်းသီးသို့မဟုတ်ဆေးရွက်ကြီးဝါးမနေပါနဲ့. အင်တာဗျူးမတိုင်မီအရက်ဆေးလိပ်သောက်သို့မဟုတ်မသုံးပါနဲ့. ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကသင့်အဝတ်ကိုမကောင်းတဲ့အနံ့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. အရက်မဆိုအလုပ်မှာခွင့်မပြုပါ.
လက်ဆွဲ America မှာဘုံများမှာ. ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်အတူတို့လက်လှုပ်မှယုတ်နှင့်အမျိုးသမီးတို့သည်လက်ကိုလှုပ်မှလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျလကျကိုလှုပ်ချင်ကြပါဘူး အကယ်., ကြောင်းအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်. အစား, သင့်ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုဖြတ်ပြီးသင်၏လက်ကိုနေရာချခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ရှေ့သို့သင်၏ခေါင်းကိုစောင်း. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ, "ဒါဟာသင်တွေ့ဆုံရန်ဒါကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ယနေ့ငါအင်တာဗျူးဖို့အချိန်ယူပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ "တချို့လူတွေကသငျသညျလကျကိုမျှဝေချင်ကြဘူးကြောင်းအံ့အားသင့်ဖြစ်. သငျသညျအဆင်ပြေခံစားရလျှင်, ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်အတူတို့လက်လှုပ်သင့်ရဲ့ဘာသာရေးကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းရှင်းပြ.
မျက်စိရှိလူများပြုံးနဲ့ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ. ဒါဟာသင်အပြုသဘောနှင့်ဖော်ရွေများမှာအင်တာဗျူးကိုပြသ. ဒီကသင်၏ယဉ်ကျေးမှု၌ထက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပေမဲ့, ဒါကြောင့်သင်ကအလုပ်တစ်ခုရဖို့ကူညီပေးဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလုပျနိုငျအရေးကြီးဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ. အမေရိကန်များအတွက်, မျက်လုံးချင်းအောင်လေးစားမှုကိုပြသခြင်းနှင့်သင်အင်တာဗျူးမှာရောက်လာ you.When လူတွေယုံကြည်စိတ်ချကူညီပေးသည်, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောလူများကရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်စေခြင်းငှါ. သငျသညျတွေ့ဆုံရန်လူတိုင်းယဉ်ကျေး Be လူတိုင်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ပြုံးဖို့ကြိုးစား.
အင်တာဗျူးမတိုင်မီသင်၏ဖုန်းကိုပိတ်ထားပါ. သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမကြည့်မရှု. သငျသညျမေ့လျှင်, နှင့်သင့်ဖုန်းကိုအကွင်း, ချက်ချင်းနှုတ်ပိတ်နှင့်ပြတ်တောက်မှုအတွက်တောင်းပန်. ဒါကြောင့်မဖြေပါနဲ့!
သငျသညျအလုပျအင်တာဗျူးဖို့လာခင်မှာ, အကြောင်းကိုများ၏စာရင်းကိုကွိုတငျပွငျဆငျ5မေးခွန်းများကို. မေးခွန်းလွှာယေဘုယျအားဖြင့်သို့မဟုတ်သင့်အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်. နိုင်ပါတယ်. သငျသညျအလုပျမြားနှငျ့ကုမ္ပဏီစိတ်ဝင်စားပြသသောမေးခွန်းများကိုမေးပါ. လုပ်ပါ မဟုတ် သငျသညျအလုပျမြားနှငျ့စီးပှားရေးလုပျငနျးစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသသည်အထိလစာသို့မဟုတ်အချိန်ချွတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးဖို့. အင်တာဗျူး၏အဆုံးမှာသင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုမေးပါ, ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ရှင်ပြောပါတယ်သည့်အခါ, "သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများပါနဲ့?"လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏မေးခွန်းများကိုပြီးသားဖြေကြားခဲ့ကြပါလျှင်, ထို့နောက်ပြောပါ, "လာမယ့်ခြေလှမ်းများကဘာတွေလဲ?"သို့မဟုတ်, "ငါသည်သင့်ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့မြျှောလငျ့နိုငျသောအခါအ?"
သတိရ, သငျသညျပြီးသားအလုပ်အင်တာဗျူးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ပြီးသားအခက်ခဲဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပြုမိပါပြီ. သငျသညျအင်တာဗျူးများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံလေ့လာသင်ယူကြနှင့်သင်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ကြပြီ. ယခုဖွင့်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်. လူတိုင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းနေစဉ်အတွင်းအမှားတွေစေသည်. သင်တစ်ဦးအမှားလုပ်လိုလျှင်, ခဏရပ်ရန်ခဏယူပြီးမှတဖန်စတင်ရန်.
အင်တာဗျူးကျော်သည်နှင့်သင်စွန့်ခွာဖို့ရတဲ့အခါ, သင်တို့အားမိန့်မြွက်လူများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များတောင်း. သူတို့သည်သင့်သူတို့ကိုလက်ရတဲ့အခါ, ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးကသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်. သူတို့တစ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်မရှိပါက, သူတို့ရဲ့အပြည့်အဝအမည်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရေးချဖို့သူတို့ကိုမေးဖို့. ဒီလမ်း, သင်သည်ထိုသူတို့သငျသညျကိုသတိပြုပါတစ်ဦးကျေးဇူးပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်သည်သူတို့၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ရပါလိမ့်မယ်.
သင်ကစာတိုက်မှတဆင့်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်စာတစ်စောင်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုသတိပြုပါတစ်ဦးကျေးဇူးပေးပို့နိုင်ပါတယ်. လူအများစုဟာအီးမေးလ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်. သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကဒ်ကိုတောင်းဖို့မေ့လျော့နေလျှင်, သငျသညျအီးမေးလ်ပို့သို့မဟုတ်မခေါ်ရုံးနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်တောင်းခံနိုင်ပါတယ်.
ယနေ့ငါနှင့်အတူပါတွေ့ဆုံဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ဒါဟာအသင်းနှင့်ရပ်တည်ချက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ထိုကဲ့သို့သောပျော်မွေ့ခဲ့. ငါ join ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့် ပတ်သက်. အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် [ကုမ္ပဏီအမည်] ကူညီ [အသစ်သော client များအတွက်ဆောင်ကြဉ်း / သင့်ဖောက်သည်များအစေခံ / သင်လုပ်နေတာမည်ဖြစ်ကြောင်းအရာအားလုံးထက်] သင့်ရဲ့အဖွဲ့နှင့်အတူ.
သငျသညျအလုပျရမထားဘူးဆိုရင်, သင့်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုသင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းဘို့သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ကျေးဇူးတင်မှတ်စုတစ်ခုပေးပို့. သူတို့သင်အလုပ်ရမရဘယ်ကြောင့်အပေါ်တုံ့ပြန်ချက်ကိုပေးမည်ဆိုပါကထိုသူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ. သင်ပိုမိုအလုပ်အကိုင်များများအတွက်အင်တာဗျူးအပေါ်စီစဉ်ထားခြင်းနှင့်တိုးတက်စေရန်ချင်သောသူတို့ကိုပြောပြပါ. လူတိုင်းမသင်ဖြေကြားပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတချို့ကိုသင်နောက်တစ်ကြိမ်အောင်မြင်ဖို့ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောမှတ်ချက်များရှိစေခြင်းငှါ!
ယခုတွင်သင်သည်အင်တာဗျူးအဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းငှါအဘယ်သို့သိပါ - လာမယ့်အဘယ်အရာကို?
ဤအချက်အလက်တွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်တစ်ဦးကိုအလုပ်အင်တာဗျူးအဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းငှါအဘယ်သို့သိရှိခြင်းကိုသင်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ. အလုပ်ရှာဖွေခြင်း United States ကိုအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့စိန်ခေါ်နိုင်ပါတယ်. ကျနော်တို့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုပေါ်တွင်သင်ကူညီပံ့ပိုးရန်လိုခငျြ.